Shiinaha Dahaarka Birta Daloolsan ayaa ka ilaalinaysa dhismaha warshadda Waxyeellada Cimilada iyo alaab-qeybiyeyaasha. Boegger
Shaashadda Birta daloollan ee Dhismaha Gogosha
Dahaarka wajiga birta daloollan ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa naqshadayaasha. Waxay isku daraysaa ilaalinta asturnaanta iyo shaqooyin badan sida iftiinka, hawo-qaadashada, go'doominta, qorraxda. Tan ugu muhiimsan, waxay ka ilaalisaa dhismayaasha isbeddelka cimilada.
Birta daloollan waxay leedahay astaamo maaddadeed oo deggan iyo awood sare oo u leh saamiga miisaanka, taas oo sahlaysa in la dhiso dhismeyaal cusub lana cusbooneysiiyo dhismeyaashii hore.
Ka dib daaweynta dusha sare, muuqaalka qaabka casriga ah wuxuu ka dhigi doonaa dhismaha mid gaar ah oo muuqaal ah.
Aluminium Aluminium Dahaaran
Gogosha Birta Dufan Anodized
Maaddadu waa qodobka ugu muhiimsan.
Dahaarka biraha daloolka leh waa in lagu soo bandhigaa banaanka oo wuxuu u baahan yahay aag ballaaran, sidaa darteed xoogga maaddada iyo iska caabbinta daxalka ayaa muhiim ah. Iyo sidoo kale saamiga culeyska-culeyska iyadoo la tixgelinayo dhibaatooyinka dhismaha iyo xasilloonida qaabdhismeedka jir.
Aluminium waa maaddada ugu isticmaalka badan.
Caabbinta sare ee daxalka. Miisaanka fudud. Muuqaal qurux badan kadib anodizing.
Birta cimiladu sidoo kale waxaa loo isticmaalaa meelaha cimilada xun, maxaa yeelay waxay leedahay saamaynta ugu wanaagsan ee ka hortagga cimilada.
Wareegsan daloolin daloolin Dhisme dalool
Guddi bireed dalool leh oo leh qaab dalool saddex geesood ah iyo dusha lacag.
Noocyada daloolka duubku waxay matalaan qiimaha qurxinta ee dhismayaasha.
Qaab dhismeedka kooban, qaababka godadka ee sida joogtada ah loo diyaariyo, sida wareegsan iyo laba geeslaha waa caan.
Saameyn muuqaal oo xoogan, qaabka godadka iyo cabbirka loo habeeyay ayaa la heli karaa.
Meelaha furan ee saxda ah waxay bixiyaan hawo hawo wanaagsan. Naqshadayaasha badankood waxay doortaan 35% aag furan si ay isugu dheelitiraan arrimaha kor ku xusan, sida nalalka, hawo-qaadashada, go'doominta, qorraxda iyo ilaalinta asturnaanta.
Daaweynta dusha sare waxaa ka mid ah dahaadhka budada iyo anodizing.
Dahaarka budada ayaa bixiya xulashooyin badan oo midab ah si loo daboolo dusha sare ee biraha, kaas oo kaa caawin kara ka hortagga miridhku iyo u adkaysiga u daxalka.
Anodizing-ka ayaa ilaalin kara dhalaalka macdanta iyadoo dheehaneysa biraha. Badanaa waxay khuseysaa aluminiumyada aluminium, kuwaas oo ka ilaalin kara alwaaxyada qiiqa iyo daxalka.
Gogosha daloolka dhismaha daloollan ee daloollan
Waxyaabaha kor ku xusan ka sokow, naqshadeeyayaasha ayaa sidoo kale tixgelin doona qaabka muhiimka ah ee shaashadaha daloola. Waxaan kaa caawin karnaa inaan si fudud u shaqeyno darfaha sida foorarka ama laabashada.
Dharkeenna dahaarka ah ee birta ah ee daloollan ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa mashaariic kala duwan, sida baarkinnada baabuurta la dhigto, saldhigyada tareenka, xarumaha laga dukaameysto, isbitaalada, guryaha dabaqyada iwm
Hore: Ahama Steel Xadhig Mesh Green Wall for fuulitaanka Dhirta
Xiga: Shaashadda Birta daloolsan ee loogu talagalay Dhismaha Saqafka